नेपाल आज | माघ २५ देखि १३ जिल्लामा हात्तीपाइलेविरुद्धको औषधि खुवाइँदै
माघ २५ देखि १३ जिल्लामा हात्तीपाइलेविरुद्धको औषधि खुवाइँदै
काठमाडौँ। सरकारले यही माघ २५ देखि १३ जिल्लामा हात्तीपाइले रोगविरुद्धको औषधि खुवाउने अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । हात्तीपाइले रोग निवारणका लागि औषधि सेवन अभियान २०७६’ सञ्चालन गर्न लागिएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेक लालले जनाए।
नेपालमा अझैपनि करिब ७५ लाख जनसंख्या हात्तीपाइले रोगको उच्च जोखिममा छन। जसअन्तर्गत हाइड्रोसिल भएका बिरामीको संख्या ३० हजारभन्दा बढी छ । नेपालमा सन् २००३ बाट हात्तीपाइले रोग निवारण अभियान संचालन गरिएको थियो । नेपालमा ६३ जिल्लामा हात्तिपाइलेका बिरामी देखिएका थिए ।
हाल ५० जिल्लामा निवारण भएको छ । बाँकी रहेका १३ जिल्लामा यही शनिवारबाट औषधि खुवाउन लागेको निर्देशक डा. लालले बताए ।यो कार्यक्रममार्फत ७४ लाख ६१ हजारलाई औषधि खुवाउने लक्ष्य लिएको छ । औषधि सेवन कार्यक्रममा ५ हजार ८ सय ८५ स्वास्थकर्मी र १० हजार ८ सय ३८ स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गरिने छ ।